Achịcha edobere 100% dị mma - egwuregwu na-akwụghị ụgwọ, HTHR FORTED Forced, na-emeri atụmatụ nke 1x2, atụmatụ nke 1X2 Butts 100% n'aka;
AKWỤKWỌ NDỊ AKWỤKWỌ KWESỊRỊ NA-AKWỤKWỌ 100%.
Egwuregwu edoziri n'efu, HT / FT Egwuregwu edoziri, Na-emeri egwuregwu a kapachara, ndụmọdụ efu bọọlụ 1x2 amụma, ndụmọdụ kwa ụbọchị 1x2 ịkụ nzọ bọọlụ, Nzọ a kapachara 100% jide n'aka;
AKWỤKWỌ KWESỊRỊ 100% doro anya
Nweta Egwuregwu Edoziri
Ngwakọta edobere 100% doro anya
Nnukwu nsogbu dị maka 21.05.2022 Satọde
Anyị nwere abụọ egwuregwu ndị edoziri ọkara oge/oge oge niile na ohere ọ bụla n'otu egwuregwu gburugburu 25.00 na ngụkọta ohere na abụọ egwuregwu ọnụ bụ mgbe niile gburugburu 500.00; Ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike zụta naanị otu egwuregwu n'ime abụọ a egwuregwu kwụ ọtọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike ịzụta matches abụọ ahụ maka nnukwu nsogbu!
Nkwado WhatsApp 24/7
Nhọrọ kacha mma maka izipu ego ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta anyị egwuregwu kwụ ọtọ bụ Cryptocurrencies (ị nwere ike iji Cryptocurrencies niile, dị ka Bitcoin, Ethereum, USDT Tether na ndị ọzọ niile), Ego zuru oke, Skrill, Neteller, Ria Money, MoneyGram na Western Union. Ụzọ ndị ọzọ maka izipu ego adịghị.
Pịa ebe a ịhụ ihe niile erere HT/FT Fixed Matches
Ebe a n'okpuru ị nwere ike ịhụ HT/FT Fixed Matches ikpeazụ anyị
14.05.2022 - Satọde
Njikọ: Ọkachamara Nkeji BOLIVIA – Apertura
Egwuregwu: Oriente Petrolero – Santa Cruz
Ndụmọdụ: 1/2 (Ọkara Oge/Oge zuru ezu)
Azịza: 34.00 Nsonaazụ: 1: 0/1: 2 meriri
Njikọ: TURKEY 1. Lig
Egwuregwu: Altinordu – Balikesirspor
Ndụmọdụ: 2/1 (Ọkara Oge/Oge zuru ezu)
Azịza: 23.00 Nsonaazụ: 0: 1/2: 1 meriri
N'okpuru ebe a bụ ihe akaebe ole na ole
N'ebe a, ị ga-ahụ naanị ihe ngosi nseta ihuenyo, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe akaebe vidiyo ị ga-emepe ọwa YouTube anyị. Ebe a na webụsaịtị anyị maka ihe nchekwa anyị enweghị ike ibipụta ihe akaebe vidiyo anyị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ileta anyị Ọwa YouTube Pịa ebe a
Pịa ebe a ịhụ ihe akaebe niile maka HT/FT Nzọ edobere
Emelitere: Mee 17, 2022 - 12:08 ehihie
Amụma NDỤMỌDỤ FREE
Nweta ndụmọdụ amụma
Atụmatụ amụma efu
Na weebụsaịtị anyị GetFixedMatch.com ụbọchị ọ bụla anyị na-ebipụta Egwuregwu efu maka ịkụ nzọ bọọlụ. Ọ dị ezigbo mkpa ka ị mara na nke a Egwuregwu efu bụ amụma na nke a abụghị Egwuregwu ndị edoziri maka mmeri.
Egwuregwu efu bụ dakọtara ihe amụma si ndị ndụmọdụ bọọlụ, nke a na-enyocha matches. Mmakọ edobere bụ egwuregwu ebe ekwenyero na uru ọ ga-enweta.
Ịkwesịrị ikpebi, ọ bụrụ na ịchọrọ Egwuregwu efu mgbe ahụ, uru agaghị ekwe nkwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ Mmakọ edobere mgbe ahụ ị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ ị nwere ike Pịa ebe a ịhụ anyị ọzọ enye mgbe anyị nwere Mmakọ edobere ma ị nwere ike ịzụta.
Emelitere: Eprel 30, 2022 - 6:30 ehihie
Nzọ egwuregwu bọọlụ echekwara echekwabara
17.05.2022 - ụbọchị ụka
Njikọ: FINLAND Veikkausliiga
Ndụmọdụ: Karịrị ihe mgbaru ọsọ 2.5
Ọdịiche: 1.50 Nsonaazụ: ?:?
16.05.2022 - ụbọchị ụka
Njikọ: NORWAY Eliteserien
Amụma: 1.50 Nsonaazụ: 3:0
15.05.2022 - ụbọchị ụka
Njikọ: NETHERLANDS Eredivisie
Egwuregwu: AZ Alkmaar – Waalwijk
Amụma: 1.50 Nsonaazụ: 1:3
Njikọ: NORWAY Nkeji 2 – Otu 1
Egwuregwu: Notdden – Arendal
Amụma: 1.50 pụta: 2:0 efu
13.05.2022 - ụbọchị ụka
Njikọ: AUSTRIA 2. Liga
Egwuregwu: St. Polten – Wacker Innsbruck
Amụma: 1.50 Nsonaazụ: 3:1
12.05.2022 - ụbọchị ụka
Njikọ: ICELAND Besta-deild karla
Egwuregwu: Vikingur Reykjavik – Fram
Amụma: 1.50 Nsonaazụ: 4:1
11.05.2022 - Wenezde
Egwuregwu: Valur – Akranes
Amụma: 1.50 Nsonaazụ: 4:0
Egwuregwu Edobere bọọlụ, Egwuregwu Edoziri efu, Ndụmọdụ 1 × 2 dabara adaba kacha mma;
Emelitere: Mee 17, 2022 - 8:59 nke ụtụtụ
Tags: See Egwuregwu Edoziri, Egwuregwu Edobere bọọlụ, Egwuregwu ndị edobere bọọlụ, Edebere tiketi, Egwuregwu ndị edoziri kwa ụbọchị
Ndụmọdụ efu 1X2
Ndụmọdụ efu 1 × 2 bọọlụ
Ndụmọdụ efu 1 × 2 egwuregwu ịkụ nzọ
Njikọ niile sitere na webụsaịtị ndị ọzọ na webụsaịtị anyị enweghị njikọ na anyị. Ọ bụ naanị mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ị chọrọ Zụta egwuregwu 100% doro anya wee webụsaịtị anyị GetFixedMatch.com bụ ebe kwesịrị ekwesị maka gị.
Emelitere: Mee 16, 2022 - 12:41 ehihie
← Okenye ochie
Ihe akaebe vidiyo YouTube
Ihe akaebe vidiyo niile ị nwere ike ịhụ na ọwa YouTube anyị. Maka ihe nchekwa anyị enweghị ike ibipụta ihe akaebe vidiyo anyị ebe a na webụsaịtị anyị. Ị ga-aga na ọwa YouTube anyị ka ị hụ ihe akaebe vidiyo niile. Pịa ebe a ọ bụrụ na ịchọrọ ịga na ọwa YouTube anyị!
Nweta Egwuregwu Edoziri (1)
Nweta ndụmọdụ amụma (82)
AKWỤKWỌ HT/FT AKWỤKWỌ NKWUKWU
Kwesịrị Ekwesị Otu Egwuregwu Ezigbo
Akara akwadoro nke ọma
Tiketi VIP akwadoro
Egwuregwu Edobere Eziokwu H2H
Ndụmọdụ nzọ nzọ
Meri Bịaruo Egwuregwu Edobere
Nzọ etinyere 1 × 2
Bet Plus Mmeri
Top nzọ amụma
Ndụmọdụ egwuregwu emechiri emechi 1 × 2
Atụmatụ Bet24 edobere 1 × 2
Ndụmọdụ egwuregwu amụma amụma kacha mma
Ndụmọdụ egwuregwu Helena 1 × 2
Ndụmọdụ egwuregwu kapịrị ọkụ
Atụmatụ amụma amụma 1 × 2
Pro na-ahọrọ 1 × 2
Nzọ 1 × 2 Atụmatụ bọọlụ taa
Ndụmọdụ egwuregwu emebere